Riix Suuqgeynta Ku Kaceysa Buug-gacmeedka | Martech Zone
Riix Suuqgeynta Ku-Meel Gaarka ah Buug-gacmeedka
Talaado, Nofeembar 27, 2012 Talaado, Nofeembar 27, 2012 Douglas Karr
Waxaan dhawaan bilaabay inaan isticmaalo Passbook on my iPhone markii aan booqanayay Starbucks. In kasta oo aan ku faanayo Starbucks Kaarka Dahabka, Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan hal dhumucdiis ku yareeyo dhumucda jeebka. Kaliya waxaan u dhiibaa barista taleefankayga waxayna awoodaan inay ku baaraan kaarkayga abaalmarinta meesha saxda ah! Aniga oo isticmaalaya barnaamijka Starbuck, ayaan si toos ah ugala soo bixi karaa kaarkayga taleefankayga sidoo kale.
Webka Xiga ayaa dhowaan sameeyay a dhaji dhammaan waxyaabaha ku saabsan Passbook iyo sida ganacsiyada ay ugu boodayaan dusha sare, laakiin faallo ku saabsan boostada ayaa runtii soo jiidatay dareenkeyga. Sababtoo ah Apple Passbook oo isku dhafan oo leh adeeggeeda ogeysiinta, kaararka ayaa fursad sare u noqda ganacsiyada si ay ugu riixaan cusbooneysiinta si fudud isticmaaleyaasheeda.
Waa tan faallo ka timid Jim Passell maqaalka, oo sharraxaya soo celinta ugu weyn ee maalgashiga:
Mid kasta oo ka mid ah macaamiishayda oo helay mid ka mid ah baasaskeyga, wuxuu helayaa cusbooneysi toddobaadle ah oo dalab cusub ah. Kaarkooda ayaa cusbooneysiiyay ama ogeysiiyay. Ama waxaan u dirayaa ogeysiis ku saabsan iibka soo socda, ama qoraal shaqsiyeed oo ka socda maareeyaha dukaanka, ama wax kasta. Markaa kaarkaygu wuxuu sii joogayaa dusha jeebkooda wuxuuna noqdaa kanaalkayga aan kula xiriiro. Waxay noqdaan macaamiil joogto ah, in kasta oo laga yaabo inay bilaabeen kaliya kuubon-gooye.
Aynu wajahno. Sanduuqa sanduuqa waxaa ku dhacay arrimo shaandhaynta spam ah macaamiishana waxay ku noqdeen kabuubyo suuqgeynta iimaylka. In kasta oo ay wali jirto soo laabasho aan caadi ahayn oo ku saabsan maalgashiga qiimaha jaban ee emaylka, helitaanka feejignaanta waa dhibaato sii kordheysa. Farriinta qoraalka ayaa ah tiknoolajiyad kale oo riixitaan oo cajiib ah, laakiin macaamiisha ayaa inta badan ka labalabeeya inay is-qortaan oo ay sii daayaan lambarka taleefankooda si ay u helaan. Ku riix ogeysiisyada adoo adeegsanaya barnaamijyada moobiilka iyo barnaamijyada sida Passbook ayaa noqon kara kuwa kuugu fiican riix suuq geyn fursada.
Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay Iskudhinta, xeelad suuq ku dhow oo ku saleysan SMS (fariin qoraal ah) ama suuqgeynta Bluetooth. Mar haddii qalabkaaga moobiilku ku kala duwan yahay, waxaad riixi kartaa ogeysiisyada. Hagaag, Passbook wuxuu bixiyaa juquraafi ahaan istiraatiijiyad, sidoo kale. Waxaad macno ahaan u riixi kartaa cusbooneysiinta gudbinta marka qof ku soo dhowaado meel u dhow juqraafi ahaan. Inta ugu fiican oo dhan, uma baahnid wax tiknoolajiyad dheeri ah oo aad ku taageerto tan iyo markii ay ka dhisantahay isla markiiba adeegyada mootooyinka moobiilka.
Maaddaama Passbook horeyba looga baahan yahay diiwaangelinta tigidhka, kaarka lagu raaco, kuubanka ama barnaamijka daacadnimada, kuwani sidoo kale waa kuwa aad ugu mashquulsan adeegsadayaasha. Waxay horeyba si firfircoon ula daba joogeen xiriirka shirkadaada. Taageeraduna kuma koobna aaladaha iOS, Attido Mobile ayaa soo baxday Baasaska jeebka, App-ka Android-ka ah oo sidoo kale u adeega baakadka baasaboorka caadiga ah.
Waad ku horumarin kartaa Baaskiilkaaga barnaamijkaaga macruufka adiga oo adeegsanaya maktabadda hooyo, ama waxaad isticmaali kartaa SDK oo kale Baasaboorka. Shirkadaha saddexaad ee horumarinta iyo maaraynta shirkadaha waxaa ka mid ah WalletKit, Baasaboorka, Qalabyada Gudbinta, Wadooyinka, PassRocket iyo PassKit.
Tags: geolocationteknoolojiyada gacantaidlaanbuugga passbook tufaaxbaasaboorbaakidhmarinnadabaasaboordaloolwarqad marinriix suuq geyntiknoolajiyada riixjeebka
10 Dariiqo oo loogu badalo martida adeegsanaysa cilmi nafsiga
Kudar Qorshahaaga Dabaqa Khariidadaha Google
Nov 27, 2012 saacadu markay tahay 5:43 PM
Waxaan ahay aasaasaha / Maamulaha shirkadda PassTools, waxaanan ka mid nahay hoggaamiyeyaasha dhismaha baasaboorka soo baxaya. Waan ku faraxsanahay inaad nagu darto liiskaaga sidoo kale.
Nov 27, 2012 saacadu markay tahay 10:56 PM
La dhammeeyay! Mahadsanid Joe!
Nov 28, 2012 saacadu markay tahay 12:12 PM
Si fiican u qoran gabal Douglas!
Waxaan ku hogaamiyaa kooxda wax soo saarka Vibes (http://www.vibes.com), shirkad tiknoolajiyada suuqgeynta moobiilka oo la shaqeysa magacyada iyo tafaariiqleyda si ay ula sameystaan ​​xiriirro deg deg ah oo waara oo ay la yeeshaan macaamiishooda. Waxaan xoogaa ku khamaareynaa buugga 'Passbook', innagoo mar horeba isku-dubaridnay awoodda maaraynta baaskiil gudbinta (abuur - gaarsiin - maamul - falanqeyn - dib-u-bartilmaameed) barkeenna. Waxaan bilownay Barnaamijka Buug-gacmeedka Buug-gacmeedka oo waxaan haysannaa dhowr nooc oo waaweyn, oo qaran ah oo doonaya inay ka faa'iideystaan ​​awoodda Passbook oo qayb ka ah istaraatiijiyaddooda suuq-geynta ee ballaaran.
Waxaan rabay inaan ku cabiro xiisahaaga ku saabsan Passbook. Waxaan aaminsanahay inay wax ka beddeli doonto sida ay magacyadu ula macaamilaan macaamiishooda daacadda u ah mararka qaarkoodna daacad u ah. Waxayna horeyba ugu riixday Google inay dib uga fikirto istiraatiijiyadooda Google Wallet.
Nov 28, 2012 saacadu markay tahay 4:51 PM
Maqaal wanaagsan, waadna ku mahadsan tahay wadaagista fursadaha horumarinta gudbinta. Iyadoo la tixgelinayo qiimaha ay u leeyihiin macaamilka iyo suuqleyda, waxaa la yaab leh in shirkado badan oo kale aysan weli ka dul boodin illaa iyo inta ay ku darayaan Passbook. Waad saxan tahay, waa mid aad ugu habboon macaamiisha (Waxaan isticmaalay barnaamijka Starbucks naftayda abid tan iyo markii aan iibsaday iPhone5), runtiina waxay umuuqataa hab wax ku ool ah oo suuq geyn loogu sameeyo dhagaystayaasha macluumaadka maanta daashaday. Waxaan rajeyneyaa inaan arko ganacsiyo badan oo kusoo biiraya Passbook, iyo ka takhalusidda bacda boorsadeyda.
Jan 17, 2013 at 6: 14 AM
Maqaal weyn Douglas iyo mahadsanid xusitaanka.
Awoodda riixitaanka ayaa laga yaabaa inay tahay muuqaalka ugu qiimaha badan ee Passbook. Macaamiishayada iyo la-hawlgalayaasheena had iyo jeer way la dhacsan yihiin markay marka hore la kulmaan fariinta shaashadda qufulka iyo 'cusbooneysiinta wareega'. Waxay kaloo ka caawineysaa inay si wanaagsan ugu dhexgalaan Passbook Passes-ka meheraddooda, oo ay ula macaamilaan macaamiishooda. yacni ma aha oo kaliya inay si fudud u hirgeliyaan beddelaad dijitaal ah oo ku-meelgaar ah ama kaar daacad ah.
Qof kastaa wuu la kulmi karaa 'cusbooneysiinta riixitaanka' naftooda hadda. Kaliya soo dejiso 'AbraKebabra' ka gudub boggayaga gurigana u rog Pass-ka si aad ugu xirto URL-ka Cusbooneysiinta Gudbinta. Fiidiyowgan degdegga ahi wuxuu muujinayaa sida loo sameeyo: http://youtu.be/D7i7RsP3MvE
Haddii aadan waayo-aragnimo u lahayn "Passbook Push" waa u qalantaa inaad siiso; iyo halka kaarka 'AbraKebabra Pass' uu muujinayo cusbooneysiin dheellitiran, fursadaha waa kuwo aan xad lahayn (maaddaama goob kasta la cusbooneysiin karo oo 'la riixi karo)